I Israel dia mamerina mandat ny mandat mask amin'ny 10 andro aorinan'ny famongorana ny famerana COVID-19
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Israel Vaovao Vaovao » I Israel dia mamerina mandat ny mandat mask amin'ny 10 andro aorinan'ny famongorana ny famerana COVID-19
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Israel Vaovao Vaovao • Vaovao • fanorenana • Resorts • tompon'andraikitra • fiantsenana • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Israel dia namerina namerina ny takiana amin'ny saron-tava 10 andro aorian'ny famongorana ny famerana COVID-19
Matahotra ny tompon'andraikitra misahana ny fahasalamana israeliana fa ny karazana Delta mifindra, izay hita voalohany tany India, no ao ambadiky ny fitomboan'ny isan'ny tranga misy, satria ny toetrany tena azo ampitaina dia midika fa afaka hiparitaka haingana eo amin'ny mponina iray izy io, ary mametraka ny risika ho an'ny fahasalaman'ny olona mbola tsy voafitaka.
Ny fanapaha-kevitr'i Israel hiverina amin'ny saron-tava 10 andro aorian'ny fanesorana azy dia ho hita fa kapoka ho an'ny governemanta ao amin'ny firenena.
Israel dia nandrakitra tranga 227 COVID-19 vaovao tamin'ny alakamisy na teo aza ny fahombiazan'ny vaksinin'ny firenena.
Toeram-panadinana COVID-19 vaovao napetraka tao amin'ny seranam-piaramanidina iraisampirenena Ben Gurion hamerana ny mety hisian'ireo aretina vaovao ampidirina ao amin'ny firenena.
10 andro monja taorian'ny namaranana ny fameperana COVID-19, dia namerina nametraka ny takiana amin'ny sarontava masaka ho an'ny toeram-bahoaka rehetra ny manampahefana israeliana.
Ny fanapahan-kevitra dia nambara tamin'ny alàlan'ny radio ampahibemaso nataon'ny lehiben'ny vondron'andraikitra mpihetsiketsika COVID-19 Israel, Nachman Ash, noho ny ahiahy fa “miparitaka ny aretina” manerana ny firenena, miaraka amin'ny isan'ny tranga “avo roa heny ao anatin'ny andro vitsivitsy.”
"Betsaka ny tanàna misy antsika izay mitombo isa sy ny vondrom-piarahamonina misy ny tranga," nampitandrina i Ash tamin'ny fanambarana nataony.
Raha ny filazan'ny tompon'andraikitra amin'ny governemanta, Isiraely nandrakitra tranga 227 COVID-19 vaovao tamin'ny alakamisy na teo aza ny famonoana vaksinim-pirenena nahomby.
Ny fanapaha-kevitr'i Israely hiverina amin'ny saron-tava 10 andro aorian'ny famongorana azy dia ho hita fa kapoka ho an'ny governemanta ao amin'ny firenena, izay hita fa mitana ny iray amin'ireo programa fanaovana vaksiny mahomby indrindra manerantany, nanome fatra iray farafaharatsiny ho an'ny 80% ny olon-dehibe .
Na eo aza anefa ny fihemorana dia nazava i Ash fa ny tompon'andraikitra amin'ny fahasalamana dia mbola “manantena fa hiaro antsika amin'ny fiakaran'ny hopitaly sy ny tranga sarotra ny vaksininy.”
Miomana hankalaza ny avonavona ny israeliana amin'ity faran'ny herinandro ity, niantso ny olom-pirenena indray ny minisiteran'ny fahasalamana mba hanao saron-tava amin'ny toerana be olona sy ivelany. Ny diabe am-piavonavonana amin'ity taona ity amin'ny alàlan'ny Tel Aviv dia antenaina fa hisy olona an'aliny, nofoanana tamin'ny taon-dasa noho ny areti-mandringana.
Ny praiminisitra vao notendrena, Naftali Bennett, dia nampitandrina ny israeliana momba ny "valanaretina vaovao" tamin'ny fiandohan'ity herinandro ity, nanangana toeram-pitsapana COVID-19 vaovao tao Seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Ben Gurion mba hamerana ny mety hisian'ny karazana aretina vaovao ampidirina ao amin'ny firenena. Nampifandraisina tamin'ny fanambarana ny alarobia io fa hampihemotra ny drafitra i Israel hanokatra ny firenena amin'ireo mpizahatany iraisam-pirenena.